दाङमा सर्वसाधारणले मास्क लगाउन छाडे संगै लमहीमा तपाइको मास्क खै ? अभियान – Sidha Patra
दाङमा सर्वसाधारणले मास्क लगाउन छाडे संगै लमहीमा तपाइको मास्क खै ? अभियान
शिवराज खनाल/लमही बुधबार, आषाढ ३०, २०७८
दाङ । दाङको लमहीमा तपाइको मास्क खै ? अभियान शुरु भएको छ । कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम कायमै रहेकोले बजारमा चहल पहल अत्याधिक मात्रामा बढन थाले संगै नागरिकहरुलार्ई मास्क लगाउन आग्रह गर्ने उद्धेश्यका साथ तपाईको मास्क खै ? अभियान शुरु गरिएको देउखुरी उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष खगेस्वर खनालले बताए । “कोरोना संक्रमणको जोखिम भइ रहदा पनि मास्क नलगाई हिड्न थालेपछि सर्वसाधारणलाई मास्क लगाउन प्रेरित गर्ने उद्देश्यले अभियान चलाउनु परेको छ” – खनालले भने ।
आज देउखुरीको लमही बजारमा मास्क नलगाई हिँड्ने व्यक्तिहरुलाई देउखुरी उद्योग बाणिज्य संघ लमहीले निशुल्क मास्क समेत वितरण गरेको थियो भने बजारमा मास्क लगाउन आग्रह गर्दै माईकिङ गर्ने , मास्क नलगाएका व्यक्तिलाई सम्झाउने, बुझाउने लगायतका कामहरु भएको थियो ।
“हाल कोरोना भाइरसको संक्रमण कायमै छ । लकडाउन खुकुलो भयो भनेर धेरै जना मास्क विना नै बजारहरुमा ओहोरदोहोर गर्ने गरेको देखिएको छ जसकारण संक्रमण फैलन सक्ने जोखिम बढी छ ” कोरोना सचेतना तथा तपाइको मास्क खै ? अभियानमा खटिएका वडा प्रहरी कार्यलय लमहिका प्रहरी सहायक निरीक्षक पुरन मल्लले भने । यस्तै हो भने बजारहरुमा निस्कदा मास्क नलगाउनेलाई कार्बाही गर्न बाध्य हुने मल्लको भनाइ छ ।
तेस्तै देउखुरी उद्योग बाणिज्य संघका सदस्य नुमाकान्त बोहराले यो अभियान संचालन गर्नै पर्ने देखिएर निशुल्क मास्क दिदै उहाँ हरुलाइ सम्झाएर बुझाएर मास्क लगाउन अनुरोध गरेको बताउछन । “अहिले बजारमा हिडडुल गर्ने धेरै जसो मानिस मास्क नलगाइ हिडने गरेको छरपस्ट देखिएको छ – कोरोना संक्रमण पुर्ण रुपमा सकिएको छैन अझै मास्क र भौतिक दुरि आबस्यक छ” – बोहोराले भने ।
तपाइको मास्क खै ? अभियानमा देउखुरी उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष खगेस्वर खनाल , उपाध्यक्ष केशब राज पोख्रेल, सदस्य नुमाकान्त बोहोरा , हरि थापा , भेष राज भट्टराई , गणेश घिमिरे , सल्लाहकार बिमला घिमिरे , सल्लाहकार डिल्ली राज खनाल , सुरक्षाकर्मी,ट्राफिक प्रहरी , लगाएत पत्रकारको समेत उपस्थिति रहेको थियो ।